Velona Indray ny Zanakavavin’i Jairo | Fiainan’i Jesosy
Velona Indray Ilay Ankizivavy!
MATIO 9:18, 23-26 MARKA 5:22-24, 35-43 LIOKA 8:40-42, 49-56
NATSANGAN’I JESOSY TAMIN’NY MATY NY ZANAKAVAVIN’I JAIRO
Nahita an’i Jesosy nanasitrana an’ilay vehivavy nandeha ra i Jairo. Azony antoka àry fa afaka manao zavatra ho an’ny zanany vavy i Jesosy, na dia nieritreritra aza izy fa nety ho “efa maty” izy io tamin’izay. (Matio 9:18) Mbola nisy azo natao ve?
Raha mbola niresaka tamin’ilay vehivavy nositraniny i Jesosy, dia nisy lehilahy maromaro tonga avy tany an-tranon’i Jairo ary nilaza hoe: “Maty ny zanakao! Nahoana no mbola manahirana ny mpampianatra ihany ianao?”—Marka 5:35.
Vaovao nampalahelo tokoa izany! Tsy afa-nanoatra i Jairo, izay lehilahy nohajain’ny fiaraha-monina. Maty ilay zanany vavitokana. Henon’i Jesosy anefa ilay vaovao ka nitodika tany amin’i Jairo izy ary nampahery azy hoe: “Aza matahotra fa minoa fotsiny.”—Marka 5:36.
Niaraka tamin’i Jairo nankany an-tranony i Jesosy avy eo. Nisy tabataba be tao satria nitomany sy nidradradradra ary nikapo-tratra noho ny alahelo ny olona. Niditra i Jesosy ary nilaza hoe: “Tsy maty ilay zaza fa matory.” (Marka 5:39) Gaga ny olona ka nihomehy azy. Fantatr’izy ireo mantsy fa tena maty ilay zaza. Nasehon’i Jesosy taorian’izay anefa fa noho ny hery nomen’Andriamanitra azy, dia afaka manangana ny maty izy, toy ny mamoha olona matory be.
Nasain’i Jesosy nivoaka daholo ny olona, afa-tsy i Petera, Jakoba, Jaona, ary ny ray aman-drenin’ilay zaza. Nentiny niaraka taminy tao amin’ny nisy an’ilay zaza izy dimy. Noraisiny ny tanan’ilay zaza ka hoy izy: “Talita komy”, izany hoe “ry zazavavy, hoy aho aminao: Miarena!” (Marka 5:41) Niarina avy hatrany ilay zazavavy ary nanomboka nandeha. Alao sary an-tsaina ange ny hafalian’i Jairo sy ny vadiny e! Tian’i Jesosy hoporofoina fa tena velona ilay zaza ka nasainy nomena sakafo.
Nandidy an’ireo olona nositraniny i Jesosy talohan’izay mba tsy hitantara ny zavatra nataony ho azy ireo. Izany koa no nataony teto. Faly loatra anefa i Jairo mivady sy ny olon-kafa ka nampiely an’ilay vaovao “eran’ilay faritra.” (Matio 9:26) Raha ny havanao no natsangana tamin’ny maty, tsy ho faly be koa ve ianao ka hitantara izany? Ny zanakavavin’i Jairo no olona faharoa tantarain’ny Baiboly hoe natsangan’i Jesosy tamin’ny maty.
Inona no tatitra voarain’i Jairo, ary ahoana no nampaherezan’i Jesosy azy?
Inona no hitan’i Jesosy sy Jairo rehefa tonga tao an-tranon’i Jairo izy ireo?
Nahoana i Jesosy no nilaza fa matory ilay zazavavy efa maty?
Efa nisy mpianakavinao na namanao maty ve? Tena afaka hampionona anao àry ny fampanantenana ao amin’ny Baiboly.
Hizara Hizara Velona Indray Ilay Ankizivavy!